are saying about Deskera
Shwetech မှ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ Deskera ERP, POS, HR, CRM cloud All in one solution ကို ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သည့် Business unit အတွက်သုံးတာ တော်တော်လေးကို operation ကို productivity တက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သလို shwetech ၏ support မှာ ကျွန်တော်တို့ team တစ်ခုလုံးပင် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသည့်အတွက် Shwetech နှင့် လက်တွဲလုပ်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
Thar Htet Lin
Manager (Business Development Section)
Shwetech ၏ website maintenance service ကို အသုံးပြုနေတာ ကြာပါပြီ. အခက်အခဲတစ်ခုခုလိုအပ်ပြီဆိုလျှင် နေရာပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဖြေရှင်းပေးသည့်အတွက် ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ contract တွင် သဘောတူထားသည့် အကြောင်းအရာများကိုလည်း မပျက်မကွက် support ပေးသည့်အတွက် shwetech နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာ လွန်စွအဆင်ပြေမှုရှိပါတယ်
Hnin Wutt Yi Minn
Support လိုတိုင်း working hour အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အတွက် စိတ်ချမ်းသာရသည်။ ကျွန်မတို့ business အတွက်လည်း လိုအပ်သည်များကို အကြံဥာဏ်များလည်း ပေးပေးသည့်အပြင် လုပ်ချင်သည့် project များကို အချိန်မှီ လုပ်ပေးသည့် အတွက် အဆင်ပြေလှပါတယ်. Deskera CRM ကိုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်မတို့အတွက် before sales ပိုင်းကို သေချာအောင် manage လုပ်နိုင်ပြီးတော့ after sales အတွက် reminder တွေ complain တွေကိုလည်း တိကျမြန်ဆန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် customer တွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ business ကို တိုးတက်စေပါတယ်။
Hein Zaw Nyein
Part time ၀န်ထမ်းများ onsite မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် attendance တွေကို track ရတဲ့ အခက်အခဲများက Deskera eLeave သုံးခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ လစာတွက်တဲ့နေရာမှာ အရင်လို manual မတွက်ရတော့တဲ့အတွက် HR တွေအတွက် အဆင်ပြေသလို Email Marketing သုံးပြီး marketing Campaign တွေကိုလည်း CRM ထဲမှာ ပြုလုပ်နိုင်သည့်အတွက် ကျွန်တော်တို့အတွက် များစွအထောက်အကူပြုပါတယ်. Shwetech ရဲ့ after sales support ပိုင်းကလည်း တော်တော်လေးကို စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။
Application Development ကို shwetech နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရသည်မှာ တော်တော် အဆင်ပြေမှုရှိပါတယ်. ပြောထားသည့် အချိန်အတွင်း launch လုပ်နိုင်သည့်အပြင် ထပ်မှန်ထပ်ဖြည့်လိုချင်သည့် function များကိုလည်း ဈေးသက်သာအောင် ညှိနှိုင်းပေးပါတယ်. အသုံးပြုမည့် customer နှင့် app နှင်ကြား မလိုအပ်သည့် function များကိုလည်း စိစစ်ပေးသည့်အတွက် ဈေးနှုန်းပိုင်း စိတ်ချရတယ်. အကြံဥာဏ်ပေးသည့်အတွက် မလိုအပ်သည်များကြောင့် ကုန်ကျစေခြင်းများလည်း မရှိနိုင်သည့်အတွက် အဆင်ပြေမှုရှိပါတယ်။
Chaw Thinzar Min
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး Live broadcasting App ကို အချိန်မှီရွေးဆွဲပေးနိုင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့် နောက်ပိုင်းလိုအပ်သည်များကို အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးသည့်အတွက် အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။ Shwetech developer team ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အထူးပင်တန်ဖိုးထားကြောင်း
အခုနောက်ပိုင်း shwetech က မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ Deskera ERP , CRM မှ email marketing , sms marketing မှာလည်း Sales သမားများ accountant သမားများအတွက် တော်တော်လေး အထောက်ပြုသည့်အတွက် အရင်လို transcation များပြီး track ရခက်နေတာမျိုးမရှိတော့ပဲ financial report များကိုလည်း တော်တော်များများထုတ်ယူလုိ့ရတဲ့အတွက် ယခုလို ကောင်းမွန်သည့် products များကို service ပေးနိုင်သည့် shwetech ကို အထူးပင် ဂု ဏ်ယူမိပါတယ်။